Umbuzo: Ngaba kukho iWebhu yeBhayibhile?
Umfundi uyabuza, " Ndandisandul 'ivenkile yendawo yasePagan kwaye ndabona incwadi ebizwa ngokuba yiWitch's Bible . Enyanisweni, kwakukho iincwadi ezi-3 ezikhoyo, bonke ngababhali abahlukeneyo, abanezihloko ezifanayo. Ndididekile-andingacingi ukuba kwakukho iBhayibhile yangempela kubabuqili. Yiyiphi enye yo kwenene ndifanele ndiyithenge ? "
Nantsi into. Ngenxa yokuba "ubugqirha" akuyiyo enye inkolelo, kunye neenkolelo ezidibeneyo zelizwe, akunakwenzeka ukubeka naluphi na uhlobo lwe-Big Book O 'Imithetho eya kusebenza kubo bonke abantu abaphanga.
Abalobi abaningana - ubuncinane ezintlanu endicinga ngazo nje ngentloko yam intloko - baye basebenzisa igama elithi "bible" kwincwadi yabo malunga nobugqirha okanye iWicca. Ngaba oko kuthetha ukuba enye ichanileyo kwaye ezine ziphosakeleyo? Akunzima.
Oko kuthetha ukuba ngamnye wabalobi abakhethileyo ukubhala malunga nekhwalithi ethile yobuthakathi kwaye abize loo mibhalo eqokelelwe "iBhayibhile."
Leli gama elithi "bible" ngokwalo livela kwi-Latin biblia , elithetha "incwadi." Ngexesha elide, igama elithi biblia sacra lalifunyenwe ngokufanayo, kwaye liguqulela "kwincwadi engcwele." Ngoko nayiphi na incwadi ethi "IBhayibhile" nje yincwadi yeetekisi kunye neemibhalo ezingcwele kumntu obhalayo . Ngoko oko akuthethi ukuba nawuphi na walaba babhali abafanelekanga ukubhalela incwadi ababiza ngokuba yiBhayibhile, kuba babhala ngesithethe sabo somntu wobugqwirha.
Apho thina, njengabantu basePagan, sivame ukubaleka kwiingxaki, imeko apho abantu babona into ebizwa ngokuba yi-biblical witch and think that it contains guidelines for ALL witches and pagans.
Ngamanye amaxesha, abeendaba baye baqhayisa kwiinguqulelo ezahlukeneyo "zeebhile zeebhilisi" baza bazisebenzisa ekudambiseni umphakathi wamaPagane - umzekelo onobuqili oya kuba njalo kuGavin noYvonne Frost, obhala incwadi enesihloko esithi "Iingqungquthela zeBhayibhile "Ekuqaleni kwawo-1970. Incwadi yabo ikhuthaza ukuziphatha ngokwesini kunye namalungu amancinci amancinci, apho - njengokuba unokucinga ngokuthe tye - ukuphazamisa umphakathi jikelele.
Okubandezelayo kukuba abantu abaninzi bathathe oku kuthetha ukuba bonke abaqhelisela abathakathi babecala ngesondo kunye nabantwana - emva koko, kwakukho kwincwadi ethi "I-Witch's Bible."
Oku kuthethi, akukho nje enye incwadi yeemigaqo, izikhokelo, imigaqo , iinkolelo, okanye ixabiso eliza kuba bonke abathakathi (nangona kunene wonke umntu uya kukuxelela ukuba ugweme incwadi ethi Frost njengesibetho, ngenxa yezizathu ezicacileyo).
Kutheni kungekho nanye imigaqo emiselweyo? Ewe, kuba kuwo wonke umlando, ukusetyenziswa kobugqwirha njengetekethi yobugcisa kwakukho isenzo esinikelwa ngomlomo ukusuka komnye umntu ukuya kwesinye. Ibhinqa elinobuqili kwindlu ye-ramshackle emaphethelweni emithi, mhlawumbi, inokuthabatha intombazana phantsi kwephiko layo ize imfundise iindlela zokulima. I- shaman inokukhetha umntu osemtsha othembisayo ukuba afunde ngemimoya emihle yesizwe sawo kwaye aqhubeke nezithethe zommandla. Kwakunolwazi olubanzi ngokubanzi njengabantu abasebenzisa lona, ​​kunye neenkcubeko kunye noluntu abahlala kulo.
Kwakhona, izikhokelo zokuziphatha ezivela kumntu omnye ukuya kwesinye ziyahluka. Nangona iinkolelo ezininzi ze-Wiccan zihambelana neWiccan Rede , kungekhona bonke abakwenzayo-nabangewona iWiccans abalandela. Ngoba? Ngenxa yokuba ayilona iWiccan.
Ibinzana elithi "Mngabikho nanye" sele libe yintlanzi yokubamba abantu abaninzi kwizithethe zamandulo zamaPagan, kodwa kwakhona, ayilandelwa yiyo yonke. Abanye abasebenzayo be-NeoPagan balandela uMthetho weThathu - kodwa kwakhona, akubona onke amaPagani enza.
Nangona kunjalo, nangaphandle kokungabikho "Mngcipheko", zonke iinkqubo zePagan zinomsebenzi othile okanye isethi yamagunya-nokuba ngaba asemthethweni okanye angacwangciswanga - achaza okokuziphatha okuvumelekileyo noko kungenjalo. Ekugqibeleni, umahluko phakathi kokulungileyo nokungalunganga - kwaye ngendlela eya kufuneka ukuba umntu ayenze ngayo - kufuneka amiselwe ngumntu ngamnye. Akukho ndlela yokuba umntu angabhala i-Code Big Moral yeentlanga kwaye ulindele ukuba wonke umntu uyayilandela.
Namhlanje, abaninzi abaqhelisela oogqirha bagcina iNcwadi yamaShade (i-BOS) okanye i-grimoire , okuqokelelwa kweentlobo, iinkonzo kunye nolunye ulwazi olugcinwe esibhaliweyo.
Nangona ama-covens amaninzi agcina i-BOS yeqela, ngokuqhelekileyo amalungu ngamnye agcina i-BOS yakhe.
Ngoko-ukuphendula umbuzo wokuqala, ukuba yiyiphi incwadi ofuna ukuyithenga? Ndiyathetha ukuba ayinandaba nonke, kuba akukho nhlobo kubo bathetha bonke abantu kwindawo yobuthakathi. Ukufumana ezinye iingcebiso malunga nokufumana ukuba zeziphi iincwadi ezifanele zikhutshwe - qiniseka ukuba ufunda Yintoni eyenza iNcwadi eFanelekileyo yokuFunda ?
Ngaba uMicrosoft uzokunceda uzuze iLottery?
Imbali kaMichelle Obama
Mongolia | Iinkcukacha kunye neMbali